Gisella Cardia: hitsangana amin'ny maty sy miroborobo ny fiangonana - Countdown ho an'ny fanjakana
Izahay dia	Gisella Cardia	September 15, 2020:
Ry zanaka malala, misaotra anao tonga teto tamin'ny vavaka sy nihaino ny antsoko tao am-ponareo. Anaka, ovay ho fiangonana kely ny tranonareo, manohiza manao tranom-bavaka. Ry zanako, miomàna, misavoritaka ny zanak'olombelona, ​​maro no ho tonga satria te handre momba an'Andriamanitra. Toy izao no fanombohan'ny fanovana ny olombelona: fantaro ny fomba fandraisana sy firesahana momba ny fanantenana, fifaliana ary fahasambarana izay hanjaka eto an-tany, tsy misy fijaliana, tsy marary, fa amin'ny Fitiavana lehibe. Anaka, ny ampahany amin'ity fanovana ity dia efa mandeha sahady. Mivavaha ho an'ny fiangonana: hitsangana amin'ny maty koa izy ary hiroborobo. Tandremo foana ny amboadia mitafy akanjo: mivavaka, mivavaha betsaka, mitanisa ny rosary masina. Ny zanako lahy malala [izany hoe ny pretra] izay tsy mino ny teniko! Ho mafy ny fijalian'izy ireo. Ankehitriny dia avelako ianao miaraka amin'ny tsodranon'ny reniko, amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amena.
← Luz de Maria -Ny fanamasinana…
Pedro Regis - Lehibe ... →